Famerenana sy naoty Pandemika. COVID-19 mihozongozona izao tontolo izao - Ikkaro
firosoana >> boky >> Valan'aretina. COVID-19 mampihorohoro an'izao tontolo izao
Valan'aretina. COVID-19 manetsiketsika ny tontolon'i Slavoj Zizek
Nividy sy namaky ity lahatsoratra ity aho rehefa navoaka tamin'ny Mey, saika tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana. Tena te hamaky ny Zizek aho saingy heveriko fa diso ny boky azoko nanakaiky azy. Farafaharatsiny mba antenaiko fa ilay boky fa tsy ny mpanoratra.
Ny fahatsapako ho nilaza izany tamiko Tsy mety ny mamaky boky momba ny COVID-19 sy ny areti-mandringana tamin'ny fiandohany. Izy dia nanana ny marika rehetra amin'ny maha mpaka vola azy. Saingy etsy ankilany dia nieritreritra aho fa avy amin'ny filozofa fanta-daza dia te hahazo zavatra misy kalitao. Mbola mieritreritra aho fa azo atao ny mamorona andrana tsara na dia tany am-piandohan'ny areti-mandringana aza. Na dia tsy mifototra amin'ny zava-nitranga aza, eny amin'ny alàlan'ny famakafakana ny tranga samihafa, ny loza taloha, sns.
Ny tena izy dia nandiso fanantenana lehibe ilay boky Tsy manoro hevitra an'iza na iza aho. Saika vazivazy.
Tahaka ny famakiana Twitter izany. Boky mora, novakiako ireo vazivazy rehetra niseho tao amin'ny Twitter ary tsy nisy ady hevitra kely noho ny tao amin'ny tambajotra sosialy. Raha ny marina, amin'ireo hevitra vitsivitsy avelany dia tsy misy iadian-kevitra fa arotsany fotsiny. Ny hevitra miorina amin'ny angona tsy marina, tsy misy kofehy, tsy misy tanjona mazava.
Marina ihany koa fa avy amin'ny famakiana izany Ny fahalalahan'i Ludovico Geymonat ary ny tsy fitovizany dia lalina. Ao amin'ny bokin'i Geymonat no ahitanao ny filaharana, ny firafitra, ny adihevitra ary ny tanjona mazava momba ny zavatra tiany hampisehoana na hanjohy hevitra….
Mba hahazoana zavatra tsara dia manoro anao aho inona ny tanjon'ny etika?
Gripa fotsiny io
Misy ny foto-kevitra, izay noresahiny tao amin'ilay boky fa amin'izao fotoana izao dia hadalana ny milaza azy ireo toy ny hoe "gripa fotsiny io." Ireto no zavatra izay mety ho noheverina ho toy izany tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana. Saingy io no fomba diso hanandramana mamakafaka ny areti-mandringana misy angona hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra, fa tsy manandrana mamakafaka ireo olana etika na filozofika mifandraika amin'ny pandemika sy ireo loza lehibe.
Ny hafatry ny toetra mpamaly faty, toa andriamanitra marina dia tena lamaody tato ho ato. Izay fanovana andriamanitra natiora. Ary na dia marina aza fa ity karazam-pankasitrahana ity dia ankafizin'ny fidiran'ny olona amin'ny tontolo iainana, io aretina io dia vokatry ny kisendrasendra, ny lozam-pifamoivoizana na ny voninkazo voasary. Tsy hetsika voajanahary namboarina hamerenana ny fandanjana sy ny fanasitranana ny planeta Tany.
Ity angamba no zavatra mampihetsi-po indrindra azontsika ianarana avy amin'ny valanaretina virtoaly ankehitriny: Rehefa manafika virus ny natiora dia mamerina ny hafantsika manokana izany. Ary ny hafatra dia: izay nataonao tamiko, ataoko aminao.
Mijanona tsy miresaka ny zavatra rehetra tsy tiako aho ary mamela izany ho toy ny naoty foana izay nahasarika ny saiko na te hanadihady zavatra aho.
Inona no tianao holazaina amin'ireo meme ireo?
Richard Dawkins dia nanambara fa ny meme dia "viriosy ao an-tsaina", fikambanana mpanafika izay "manjanona" ny sain'olombelona, ​​amin'ny fampiasana azy io ho toy ny fomba fampitomboana, hevitra iray izay tsy avy amin'ny zavatra betsaka na ambany noho i Lev Tolstoy.
Etika ara-tsosialy sy fikarakarana ireo be antitra sy marary
Raha fintinina, ny tena hafatra napetrany dia ny tsy maintsy hampihenantsika ny andrin'ny fitsipi-pitondran-tena ara-tsosialy ataontsika: ny fikarakarana ny be antitra sy ny osa Italia dia efa nanambara fa raha hiharatsy ny raharaha, dia avela ho eo am-pelatanan'izy ireo ihany ireo mihoatra ny valopolo taona na marary mafy efa nisy teo aloha. Tokony ho tsapantsika fa ny fanekena ny lojika amin'ny "fahaveloman'ny mahery indrindra" dia manitsakitsaka na dia ny fitsipi-pitondran-tena ara-tafika aza, izay milaza amintsika fa aorian'ny ady, dia hikarakara aloha ireo izay maratra mafy, na dia kely aza ny vintana hanavotana azy ireo. Mba hisorohana ny tsy fifankahazoan-kevitra dia tiako ny manambara fa tena zava-misy tanteraka aho: tokony manomana fanafody isika mba hahafatesan'ireo izay marary tsy misy fanaintainana, hamonjy azy ireo fijaliana tsy ilaina. Fa ny fitsipiky ny voalohany dia tsy tokony hivoatra ara-toekarena, fa hanome fanampiana tsy misy fepetra, na inona na inona fandaniana, ho an'ireo izay mila izany mba hahafahan'izy ireo miaina.
Andraikitra manokana sy andrim-panjakana
Tao anatin'izay andro vitsivitsy izay dia henontsika matetika fa tompon'andraikitra manokana isika tsirairay ary tsy maintsy manaraka ny lalàna vaovao. Ao amin'ny haino aman-jery dia ahitantsika tantara be dia be momba ny olona izay nanao fitondran-tena ratsy ... Ny olana amin'izany dia mitovy amin'ny fanaovan-gazety miresaka momba ny krizy amin'ny tontolo iainana: manasongadina loatra ny andraikitsika manokana ny media, mitaky ny hijerentsika bebe kokoa ny fanodinana sy ny olana hafa. ny fitondrantenantsika.
Chascarrillo momba an'i Trump sy ny sosialista
Araka ny voalaza: ao anaty krizy dia sosialista daholo isika. Na i Trump aza izao dia mandinika endrika fidiram-bola iraisan'ny Universal Basic: karama $ 1000 ho an'ny olon-dehibe olon-dehibe. Dolara an-tapitrisany maro no mandika ny lalàna mifehy ny tsena mahazatra rehetra.
Amin'ny hafatra fandaozana ireo zokiolona any Amerika
Ny hany fotoana tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nisy zavatra nitovy tamin'izany, raha ny fahalalako azy, tamin'ny taona faramparan'ny governemanta Ceausescu any Romania, rehefa tsy nanaiky ny fidiran'ireo mpisotro ronono, na inona na inona toerany ireo hopitaly, satria tsy noheverina izy ireo tsy misy ilana azy eo amin'ny fiaraha-monina. Mazava ny hafatra fonosin'ireto fanambarana ireto: ny safidy dia eo anelanelan'ny fiainana maha-olona be dia be sy tsy azo isaina ary ny "fomba fiaina" amerikana (izany hoe kapitalista). Amin'ity fifidianana ity dia very ny ain'olombelona. Fa io ihany ve no safidy?
Ny fijoroan'ireo izay mahita ny krizy ho fotoana tsy ara-dalàna izay tokony hanaovan'ny fahefam-panjakana ny adidiny ary manaraka ny torolalany isika amin'ny fanantenana fa hisy karazana ara-dalàna haverina amin'ny ho avy tsy ho ela dia hadisoana iray. Tokony hanaraka eto isika Immanuel Kant, izay nanoratra momba ny lalàm-panjakana: "Mankatoava, fa mieritrereta, tazomy ny fahalalahana misaina!" Androany dia mila bebe kokoa noho ny hatramin'izay izay nantsoin'i Kant hoe "fampiasan-tsaina ampahibemaso."
Fanovozan-kevitra momba ny boky momba ny boky hitako fa mahaliana
Jane Bennett, Vibran Matter. Antsoina hoe materialista vaovao izy io
Martien Mueller, "Assemblages and Actor-network: Fandraisana an-tanana ny fahefana ara-tsosialy, politika ary habakabaka", nalaina tao amin'ny http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gec3.12192/pdf
Ryszard Kapuściński, The Shah na ny fihoaram-pahefana, kaontin'ny revolisiona Khomeini any Iran
1 Gripa fotsiny io
2 Valifaty natiora
3 Fanamarihana mahaliana
4 Fanovozan-kevitra momba ny boky momba ny boky hitako fa mahaliana